Ngura haina kuregererwa pakushoropodzwa kwaLinus Torvalds | Linux Vakapindwa muropa
Mavhiki mashoma apfuura nhau dze kumwe kuitiswa kwakaitwa mu iyo linux-rinotevera bazi, iro rinosanganisira seti yekutanga yezvinhu kukudziridza madhiraivha echishandiso mumutauro weRust.
Izvi zvinyorwa zvakaburitswa zvakasiyana pakushandiswa kweRust muLinux kernel uye semuenzaniso weiyo kernel module ine hunhu mudziyo mutyairi mumutauro weRust. Iyo kodhi yakawedzerwa naStephen Rothwell, muchengeti webazi.
Mushure meizvozvo Linus Torvalds akaenda pamusoro peyekuita ongororo chigamba chemikana yekumisa Rust madhiraivha emitauro muLinux kernel uye akataura kumwe kushoropodza.
Kunyunyuta kukuru kwakakonzerwa ne kutiza kugona "Run-time kutadza kutya" mune zvisizvo mamiriro, semuenzaniso, mune yekunze-kwendangariro mamiriro, apo masimba ekurangarira ekugovera mashandiro, kusanganisira iwo eiyo kernel, anogona kutadza.
Torvalds akataura kuti kutarisa kwakadaro pamusoro peiyo kernel hakugamuchirwe, Uye kana iwe usinganzwisise iyi poindi, unogona kuramba zvachose chero kodhi inoedza kushandisa nzira yakadaro. Kune rimwe divi, musimudziri wechigamba akabvumirana nedambudziko uye akarifunga kuti rinogadziriswa.
Rimwe dambudziko rave rekuedza kushandisa inoyerera poindi kana 128 bit mhando, izvo zvisingaenderane nenzvimbo senge Linux kernel.
Unogona kusanzwisisa mabhenefiti ekuti zvinogona kuitika riini, saka pamwe
harisi dambudziko pane zvandinofunga, asi zvine musoro
Ini ndinofunga kana chero Rust mepu inogona kukonzera kuvhunduka, izvi zviri nyore
_ zvine mutsindo_ hazvigamuchirwe.
Mepu kukundikana mune isiri-yepamoyo controller kana kodhi, uye ndiko kuti, kwe
tsananguro, yese nyowani Rust kodhi, haigone kumboita chikonzero
kutya zvakanaka. Izvo zvinoenda kuna «o, mune zvimwe zviitiko ini handina kuyedza kushandiswa kwe
128-bit manhamba kana nzvimbo inoyerera '.
Saka kana iyo Rust compiler ichikonzera yakavanzika migove isingagone kuve
kuona uye kudzoka semhosho, saka ini ndinotenda zvakanyanya kuti zvese izvi
nzira inofanirwa kuve yakazara NAK'ed, uye iyo Rust zvigadzirwa,
kungave pane compiler level kana mu kernel wrappers, iwe unoda zvimwe
Iri rakazove dambudziko rakakomba., kubvira panguva ino Raibhurari yepakati peRust haina kuoneka uye inomiririra banga rakakura; hapana nzira yekukumbira chete mamwe maficha, nekudaro kudzivirira kushandiswa kweimwe kana kumwe kunetsa kushanda.
Mhinduro yedambudziko ingangoda shanduko kune iyo ngura compiler uye raibhurari, kunyangwe timu ichi isati iine zano rekuti riite modularity yemaraibhurari emitauro.
Uyewo, Torvalds akataura kuti yakapihwa muenzaniso controller haina basa uye ndokuraira kuti ubatanidze semuenzaniso mutyairi anogadzirisa rimwe rematambudziko chaiwo.
Izvi zvisati zvaitika Google yakazivisa kutora kwayo chikamu chekusimudzira Rust rutsigiro muLinux kernel y yakapa hunyanzvi zvinhu yekugona kwekushandisa Rust kurwisa matambudziko anomuka kubva mukukanganisa mukushanda nendangariro.
Google inofunga kuti Rust yakagadzirira kujoina C semutauro wekuvandudza Linux kernel zvikamu. Chinyorwa ichi zvakare chinopa mienzaniso yekushandisa Rust mutauro kukudziridza madhiraivha enjere, mune mamiriro ekushandisa kwayo papuratifomu yeApple (Rust inozivikanwa semutauro unotsigirwa zviri pamutemo wekusimudzira Android).
Inofanira kuonekwa kuti Google yakagadzirira yekutanga prototype yemutongi yakanyorwa muRust yeiyo Binder yekudyidzana-yekutaurirana nzira, iyo inobvumidza yakadzama kuita uye chengetedzo kuenzanisa kweBinder kuitisa muC uye Rust.
Mune chimiro chazvino, basa harisati rapedzwa, asi kune angangoita ese mabviro eiyo kernel mashandiro anodikanwa kuti Binder ishande, zvidimbu zvakagadzirirwa kushandisa izvi zvinodzikiswa mune Rust kodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ngura haina kuregererwa kubva mukushoropodzwa kwaLinus Torvalds
Kushora kwavo kwese kuri kwechokwadi, zvichipiwa kuti Rust mutauro mutsva unoshanda neimwe paradigm kupfuura C, zvinonzwisisika kunetsekana nezve chero chinhu chiri mumaraibhurari kana mumubatanidzwa pachayo apo, kunyangwe kodhi iri ichishanda, inokonzeresa tsanga kutyora semabatirwo anoitwa uye kuvakwa. Ndosaka mazano sekukwanisa kuyeraira raibhurari kuti ifone uye chengeta inoshanda chete iwo mabasa anodiwa kuchirongwa (kana mune ino for any controller) anoshanda nemazvo. Kana izvo zvaunokumbira hazvina musoro, kuti vanokuunzira chaiwo prototype controller inoita basa nemazvo padambudziko razvino (kana zvirinani rinoita basa rakafanana neiro riripo muiyo kernel uye rinoshanda pasina kuvhunduka).
Nguva nenguva ndinodzoka kuti ndiverenge zvinyorwa zveLinux Addict asi zvinonditorera zvishoma kuora mwoyo pandinoona kuti kunyangwe paine zvakanaka zvemukati, mhedzisiro yekupedzisira inoparadzwa nechiperengo chinotyisa.
Ko chiperengo uye girama zvichave zvakaoma kudaro here?